MyMAF: COVID-19 संकटको समयमा मोबाइल इनसाइट
Alexandra Altman मा सेप्टेम्बर 10, 2020 द्वारा लिखित।
जब हामी हाम्रो नयाँ MyMAF सिर्जना गर्न सेट हुन्छौं २०१ 2018 मा फिर्ता, हामी केहि निर्माण गर्न चाहान्छौं जुन हाम्रो मूल्यमान्यताहरूमा बाँच्नेछ। हामी उनीहरू कहाँ छन् मानिसहरू भेट्ने गर्छौं: जाँदा, अन्वेषकहरूले परिवारमा निर्भर हुनेहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि देखेका इन्टरनेट पहुँच गर्न स्मार्टफोन। हामी तिनीहरूको यात्रा र आवश्यकताहरू सुन्नेछौं, र द्विभाषी, सांस्कृतिक रूपमा सम्बन्धित सामग्री प्रस्ताव गर्नेछौं जुन वास्तविकता र कम आय र आप्रवासी समुदायहरूको जीवन अनुभव प्रतिबिम्बित गर्दछ। हामी पहिले नै राम्रो र मान्छेहरूको जीवनमा काम गर्ने कुरामा निर्माण गर्नेछौं: अर्को वित्तीय व्यवस्थापन वा बजेट पाठ निर्धारित गर्नुको सट्टा, हामी मानिसहरूलाई चिनिन्छ विशेषज्ञहरू ती हुन् भनेर। हामी एक उपकरण प्रदान गर्दछौं जसले मानिसहरूलाई आफ्नो योजनाको लागि सशक्त बनायो जुन उनीहरूको जीवनका लागि सान्दर्भिक र मूल्यवान थियो, तिनीहरूलाई उनीहरूको लक्ष्यसम्म पुग्न मार्ग निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ - जे जे भए पनि।
आजको नयाँ COVID-inflicted संसारमा ती मार्गनिर्देशन सिद्धान्तहरू र उपकरणहरू अमूल्य साबित भएका छन्। भर्चुअल मीटिंग र रिमोट समर्थन द्वारा चिनो लगाइएको नयाँ सामान्यमा रूपान्तरण गर्दा, मानिसहरूलाई पहिलेभन्दा बढि तयार र पहुँचयोग्य वित्तीय स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ। नयाँ टाढाको संसारसँग मिलाउन तिनीहरूलाई उपकरणहरू चाहिन्छ। पछिल्ला केही महिनाहरूमा हामीले देख्यौं कि कसरी MyMAF ती उपकरणहरू मध्ये एक हुन सक्छ।
अप्रिल देखि, MyMAF अनुप्रयोग मा गतिविधि तेजी बढेको छ। पछिल्ला months महिनामा, ,000००० भन्दा बढी व्यक्तिहरू MyMAF भ्रमण गरेका छन् - लगभग १०,6०० व्यक्तिहरूको विशाल बहुमतको लागि लेखांकन जुन २०१ late को अन्तमा MyMAF प्रयोग गरेर MyMAF प्रयोग गर्‍यो।
सब भन्दा पहिले, हामीले सोच्यौं कि मानिसहरू हाम्रो रैपिड प्रतिक्रिया अभियानको बारेमा मात्र अधिक जानकारीका लागि खोजी गरिरहेका थिए। वित्तीय सशक्तीकरण उपकरण भन्दा बढी, मानिस आवश्यक छ प्रत्यक्ष नगद सहयोग आज - त्यसैले हामीले तिनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यौं। तर जब MyMAF प्रयोगकर्ता संख्या माथी चढे, हामीले केहि मानिसहरु लाई सामग्रीसँग सक्रिय रुपमा संलग्न भएको, वित्तीय कार्य योजना बनाउने those र ती योजनाहरुमा प्रगति गर्दै गरेको देख्यौं! त्यसोभए हामीले नजिकबाट हेरेका थियौं: MyMAF ले मानिसहरूलाई COVID को समयमा उनीहरूको आर्थिक यात्रामा कसरी मद्दत गरिरहेको छ?
व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्या स्प्यानिशमा वित्तीय उपकरणहरू र संसाधनहरूको लागि MyMAF मा भर परेको छ। हामी व्यक्तिहरूमा पहुँचको तरिकामा जानकारी प्राप्त गर्ने कुरामा भरोसा गर्छौं। त्यसकारण हामीलाई यो जान्न प्रोत्साहित गरियो कि २, Spanish०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू स्प्यानिशमा MyMAF अनुप्रयोग प्रयोग गर्दैछन् - वित्तीय शिक्षा मोड्युलहरू पहुँच गर्न, वित्तीय कार्य योजनाहरू निर्माण गर्न, र ती सूचिहरू मार्फत कार्य गर्न। यसले एमएएफले सेवा गर्ने समुदायहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, एप कसको लागि निर्माण गरिएको हो, र हामीले धेरै वर्षहरूमा काम गरेका छौं: एमएएफ क्लाइन्टहरूको करीव एक चौथाई अ who्ग्रेजी भन्दा स्पेनिश रूचाउनेहरू।
द्रुत र कार्ययोग्य सामग्रीमा बढ्दो चासो त्यहाँ छ। व्यक्तिहरूले वित्तीय शिक्षा पहुँच गर्न अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहेका छन्, कहाँ र कहिले तिनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा। MyMAF होमपेजमा चार अन्तर्क्रियात्मक सामग्री मोड्युलहरू प्रदान गर्दछ, क्रेडिट कभर गर्दै, बचत, स्वरोजगार, र आप्रवास आपतकालको लागि तयारी गर्दै। मार्च र जुलाई बीच, सामग्री मोड्युलहरूको अनौंठो दृश्यहरू 700% भन्दा बढि बढ्यो! MyMAF प्रयोगकर्ताहरूले Ever० वित्तीय शिक्षा भिडियोहरूको एक छुट्टै अनलाइन पुस्तकालय पहुँच गर्न सक्दछन्, EverFi सँग साझेदारीमा प्रस्ताव गरीएको। हामीले MyMAF मार्फत एभरफाइ भिडियो हेराईहरूमा समान वृद्धि देख्यौं - मार्चको तुलनामा जुलाईमा लगभग 1००१TP१ टी बढेको। विशेष रूपमा, सामग्री मोड्युलहरू र भिडियोहरूको हेराई दुबै अगस्तमा अस्वीकार गरियो, र हामी MyMAF कसरी प्रयोगको क्रमशः विकसित हुँदैछ भनेर हेर्न नजिक नजर राख्यौं।
व्यक्ति बचतको बारेमा जानकारी खोज्दै छन्। धेरै मानिसहरू हालको आँधीबेहरीको मौसममा बचतमा डुबिरहेका छन् भने पनि मानिसहरू अगाडि हेरिरहेका छन्। धेरैले चासो राख्छन् कि उनीहरूले कसरी बचत निर्माण गर्न सक्छन् ताकि तिनीहरू अर्को संकटको लागि तयार छन्। MyMAF को वित्तीय शिक्षा मोड्युलहरू र एभरफाइ भिडियोहरूमा, बचतको बारेमा जानकारी प्राय जसो प्राय: दोस्रो वा प्राय: प्रायः हेरिने सामग्री हो। यो लाइनहरू अरूले के रिपोर्ट गरिरहेका छन् साथ अप: एक अनुसार ब्ल्याक रकको आपतकालीन बचत पहल द्वारा सर्वेक्षण, 1२१ टीटी१ उत्तरदाताहरूले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूले बचतमा राखेको रकम बढाएको छ वा भविष्यको लागि तयार हुनको लागि अधिक बचत सुरू गरेको छ।
मानिसहरूले योजनाहरू बनाइरहेका छन् - र ती योजनाहरूमा कार्य गरिरहेका छन्। वित्तीय कार्य योजनामा आईटमहरू थप्ने प्रयोगकर्ताहरूको संख्या २ 250०१टीपी १ टी भन्दा बढि बढेको छ (औसत users० प्रयोगकर्ताहरूबाट प्रत्येक महिना २१०+ सम्म)। र लगभग 1०१TP१ टी प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूका कार्य योजनाहरूमा आईटमहरू पूरा गर्दैछन्।
क्रेडिट, क्रेडिट, र अधिक क्रेडिट। क्रेडिट आज मान्छेहरूको दिमागमा शीर्ष छ - कसरी संकटले उनीहरूको creditणलाई असर गर्ने छ, र यसले उनीहरूको वित्तीय जीवन र अवसरहरूमा पार्ने असरहरू दिनेछ। मा Finicity बाट भर्खरको रिपोर्ट, COVID-१ by द्वारा आर्थिक रूपमा प्रभावित व्यक्तिहरूको 11११TPTP1 टी तिनीहरूको क्रेडिट मा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा चिन्तित छन्। MyMAF मा, हामीले उनीहरूको वित्तीय योजनाहरूमा क्रेडिट-सम्बन्धित कार्यहरू थप्ने प्रयोगकर्ताहरूमा ठूलो वृद्धि देख्यौं। शीर्ष तीन थपियो र पूरा कार्य वस्तुहरू सबै क्रेडिटसँग सम्बन्धित छन्: उनीहरूको क्रेडिट स्कोर जाँच गर्नको लागि एक लक्ष्य सेट गर्ने, क्रेडिटलाई असर गर्ने कारकहरूको बारेमा बढी सिक्दै, र क्रेडिट लक्ष्य सेट गर्नुहोस्।
हामी चाहन्छौं कि MyMAF एक उपयोगी उपकरणको रूपमा जारी रहोस् मानिसहरूलाई नयाँ COVID-19 वास्तविकता नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न। जब हामी अगाडि बढ्छौं, हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू र सेवाहरू सान्दर्भिक रहन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं। त्यसो भए, हामी च्यानल खुला राख्दै छौं। दैनिक आधारमा, हामी कुरा गर्दैछौं र क्लाइन्टहरू उनीहरूको चुनौती र आवश्यकताहरू बुझ्नको लागि सुन्न चाहन्छौं। उनीहरूका कथाहरू र यात्राहरूले भविष्यका संस्करणहरूमा नयाँ सामग्री, सुविधाहरू, र उपकरणहरू सूचित गर्नेछन्। हामी अर्को के हेर्न उत्साहित छौं, र हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं हामीसँग हुनुहुन्छ।
MyMAF डाउनलोड गर्नुहोस्